Xiisad ka dhalatay laba qof oo Soomaali ah oo lagu dilay Degmada Mandheera – STAR FM SOMALIA
Somalida ku dhaqan Degmada Mandheera Ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya, ayaa maanta ka carootay dilka laba qof oo Soomaali ahaa, oo Ciidamada Kenya ay maanta ku dileen Degmadaasi.
Ciidamada Kenya, ayaa rasaas oodda kaga qaaday gaari ay saarnaayeen dad Soomaali ah, xilli xaaladdu ay deganayd, wax muskhilad ahna aanay ka jirin goobtaasi.
Somalida Kenyanka ah, ayaa isugu soo baxay wadooyinka Degmada Mandheera, iyagoona ka dhigay dibadbaxyo ay ku cambaaraynayaan dilka labadaasi qof.
Dibadbaxayaasha, ayaa waxay ku qaylinayeen ereyo kul kulul oo ka dhan ah Ciidamada Kenya iyo Xukuumadda Nairobi, iyagoona ku eedeeyay inay gumeysi geliyeen Somalida Kenyanka ah.
Maxamed Cali oo ka mid ah Somalida degan Degmada Mandheera, ayaa sheegay inaanay aqbali karin in bilaa sabab lagu dilo laba qof, saddex kalana lagu dhaawaco, isagoona Dowladda Kenya ka dalbaday inay sharciga horkeento kuwii falkaasi ka dambeeyay.